बालबच्चालाई पहिलो पटक विद्यालय पठाउँदै हुनुहुन्छ ? » Nepal Fusion	Nepal Fusion	बालबच्चालाई पहिलो पटक विद्यालय पठाउँदै हुनुहुन्छ ? » Nepal Fusion
बालबच्चालाई पहिलो पटक विद्यालय पठाउँदै हुनुहुन्छ ?
नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदैछ । कति अभिभावकले यही सत्रदेखि आफ्नो बालबच्चालाई पहिलो पटक विद्यालय पठाउँदै होलान् । बच्चालाई पहिलो पटक विद्यालय पुर्‍याउँदा आमाबुवा केही रोमाञ्चित हुन्छन् । एक किसिमको खुसी पनि जाग्छ । साथसाथै अज्ञात भय पनि ।
आफुले कहिल्यै अरुको साथमा नछाडेको वा आफ्नै काखमा लुटुपुटु बनाएर खेलाइरहेको बच्चालाई घर बाहिर र अरुको साथमा छाड्दा केही पो हुने को कि ? बच्चा रुने हो कि ? खानपान नमिल्ने हो कि ? झगडा गर्ने हो कि ? यस्ता अनेक प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसो त साना बच्चालाई पनि थाहाँ हुँदैन कि, विद्यालय किन जाने ? पुस्तक किन पढ्ने ? आमाबुवासँग किन छुटिएर बस्ने ?
सुरुका दिनमा त उनीहरु फुरुंग पर्न सक्छन्, आमाबुवासँग कतै घुम्न जाने पाइयो कि भनेर । घरभित्रै हुर्किरहेका बच्चालाई बाहिर घुमफिर गर्न रमाइलो लाग्छ । पहिलो पटक विद्यालय जाँदा पनि उनीहरुलाई त्यस्तै लाग्छ । नयाँ ब्याग बोक्न पाउँदा पनि उनीहरु रमाउँछन् ।
विद्यालय पुगेपछि त्यहाँको माहौल देखेर, अरु साथीसंगी देखेर उनीहरु दंग पर्छन् । उन्मुक्त खेल्छन् । रमाउँछन् । तर, आमाबुवाले छाडेपछि भने उनीहरु रुन थाल्छन्, चिच्याउन थाल्छन् । किनभने उनीहरुलाई थाहा हुँदैन कि, त्यहाँ आमाबुवा हरक्षण आफ्नो साथमा हुनेछैन ।
यही कुरा थाहा पाएपछि भने उनीहरु खिन्न हुन्छन् । कहिल्यै आमाबुवाको साथ नछाडेका ति बालबच्चालाई आमाबुवाको तिर्सना लाग्न थाल्छ । त्यसपछि उनीहरु रुन्छन् ।
भोलिपल्ट जब उनीहरु विद्यालयका लागि तयार हुन्छन्, अघिल्लो दिनको जस्तो जोश र उमंग हुँदैन । किनभने विद्यालय पुर्‍याएपछि आमाबुवा गायब हुन्छन् भन्ने उनीहरुलाई परिसकेको हुन्छ । कति आमाबुवाले बच्चालाई फकाएर, झुट बोलेर विद्यालय पुर्‍याउँछन् । विद्यालयको प्राङ्गण टेक्नसाथ उनीहरु उसैगरी रुन र चिच्याउन थाल्छन् ।
यसरी सुरुवाती दिनमा बच्चालाई विद्यालय पुर्‍याउन एवं विद्यालयमा बस्ने बानी गराउन मुश्किल हुन्छ । बच्चाहरु किन रुन्छन् ? किन उनीहरु विद्यालयमा बस्न रुचाउँदैनन् ? किन उनीहरु आमाबुवालाई छाड्न मन गर्दैनन् ?
बच्चाको यो मनोविज्ञान चाहि स्वय्म आमाबुवा र शिक्षक/शिक्षिकाले समेत बुझ्नुपर्ने हुन्छ । हामी ठूलो मान्छेलाई पनि कुनैपनि कुरामा तुरुन्त बानी पार्न गाह्रो हुन्छ । कहिल्यै नगरेको काम गर्न कठिन हुन्छ । कहिल्यै नपुगेको ठाउँमा घुलमिल हुन असहज हुन्छ ।